Masoarabo: Manohitra ny fomba Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Aogositra 2018 8:01 GMT
Muneeb, avy ao amin'ny Mideast Youth, manazava momba an'i Huwaider, nilaza hoe:
Iray amin'ireo mpitarika ny hetsika izy mba hamadika ny fandraràna ny vehivavy tsy hitondra fiara [miaraka amin'i Fawzia al-Oyouni, Ibtihal Mubarak ary Haifa U.] Raha ny marina, hevitra avy aminy miaraka amin'ny mpikatroka hafa ny fanangonan-tsonia tamin'ny volana septambra. Tamin'ny taona 1990, vehivavy 47 no nitondra fiara tao an-drenivohitra Riyad, mihantsy ny fandraràna. Vetivety izy ireo dia voahodidina .. saingy marobe ny fahasamihafan'ny ankehitriny sy ny tamin'izany .. indrindra amin'ireo fanavaozana rehetra napetraky ny mpanjaka vaovao Abdullah sy ny zava-misy fa marobe ny olona manohana ny vehivavy mitondra fiara. Nanadihady vehivavy 400 mikasika io lohahevitra io ny Arab News, nilaza fa ny 282 tamin'ireo natao fanadihadiana fa te-hitondra fiara irery raha azony atao, ny 44 ​​nilaza fa hanohy hampiasa mpamily izy ireo, ny 30 nilaza fa te-hitondra fiara izy ireo raha misy lehilahy mpiambina miaraka amin'izy ireo, ny 12 nanohitra ny hevitra hitondran'ny vehivavy fiara.
Mbola tao amin'ny Mideast Youth ihany, Saodiana Rasha nandoko sarina vehivavy samihafa ao an-drenivohitra Saodiana.
Nandalo fotsiny ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy teto Riyadh, Arabia Saodita. Saika ny vehivavy rehetra niresahako no tsy nahalala akory hoe andro hankalazana ny zava-bitan'ny vehivavy ny 8 martsa.
Ao anatin'ny kolotsaina henjana tahaka ny anay ao Arabia Saodita, sarotra be ho an'ny vehivavy ny mankalaza io hetsika io mivantana ka tsy misy fanafihana ataon'ny vondrona mpandala ny nentin-drazana izay mino mafy fa tsy tokony hametraka tongotra eo ivelan'ny varavaran'izy ireo tsy misy lehilahy mpiambina ny vehivavy.
Nanatrika foaram-boky, tamin'ny andro natokana ho an'ny fianakaviana, niatrika toe-javatra mahatsiravina i Rasha sy ny namany. Manazava izy:
Raha teo am-pijerena boky vitsivitsy aho, dia naheno lehilahy iray teo akaikiko namerina mafy hoe (astagfor Allah) izay midika hoe Oh Allah. mibebaka aho .. nangataka famelan-keloka izy satria akaikina vehivavy roa tsy nanarona ny tarehiny, izay izaho sy ny namako!
Tezitra tamin'ny fihetsiny aho ary nanamarika tamin'ny fomba tsy dia mahafinaritra fa raha tsy te-ho any amin'ny toerana iray voahodidinay vehivavy izy, dia tokony hiala sy hitsidika ny foara amin'ny andro natokana ho an'ny lehilahy!
Naneho ny hatezerany amin'ny tranga toy izany izy ary nanoratra hoe:
Manao izany ity lehilahy ity sy ny maro toa azy rehefa miresaka na mifampiraharaha amin'ireo vehivavy vahiny (tsy havana), nifampiraharaha tamin'ny maro tamin'ny asako aho. Matetika aho manaisotra izany toe-tsaina tia manambany ahy izany, satria jerena toy ny zavatra ratsy, maloto sy zavatra fahafinaretana ho an'ny lehilahy mba ho azy sy hananany ny vehivavy. Tsy fantatro hoe maninona aho no lasa sarotiny tampoka amin'ny hetsika tahaka izany… Leo an'ireo fanevatevana toy izany aho, hoy aho an'eritreritra!
Manontany tena i Rasha: “Moa ve mendrika ny hankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ny vehivavy Saodiana?” ny valiny dia hoe:
Nahita aho fa tsy mandroso tsara izahay, saingy nahatsapa koa aho fa mampitaha hatrany ny tenantsika amin'ny olon-drehetra manodidina antsika isika ary tsy rariny mihitsy ho an'ny zava-bitantsika manokana izany! Azoko antoka fa nandroso isika na dia toa dingana bitika aza izany raha oharina amin'ireo firenen-kafa any afovoany atsinanana.
Mitazona fomban-drazana sasany ny firenenay, tahaka ny hoe mihantona amin'ny fiainana sarobidy, ary maro aminay no mametraka ny fakany tena matevina sy miditra lalina be ao anatinay ka mila tsy ho vita ny manaisotra azy fotsiny. Mahita olona maro aho te-hanapatapaka izany amin'ny fomba tsotra amin'ny fitetitetehana matevina ny vatan'ireo fomban-drazana ireo tsy mahafantatra fa mbola miorina ao ny fakany.. mety mbola hitombo miaraka amin'ny rano kely ihany izy ireo. Tiako ny manasa ireo namana izay mitovy fitiavana sy fahalianana amiko ao anatin'ity hetsika tsy manam-paharoa ity, mitondrà angady tsirairay avy ary atambaro ny herintsika mba hihady ny manodidina ny hazo mba hahitana ny fotony .. ny fakany .. ary hanaisotra izany. Mila ezaka, faharetana sy fotoana izany.. Raha vao mahatsapa aho fa afaka tamin'izany hazo matevina, mavesatra sy ratsy izany ny tany, dia hanoroka izany. Mety handatsaka ranomaso mihitsy aza aho tsy mahalala fa noho ny fanaintainana niaretako tamin'ireo tsilo maranitra nanindrona imbetsaka ny hoditro izany, ka mampahatsiahy ahy matetika ny holatra tsirairay amin'ny fiainana mahavehivavy, ny henatra fa vehivavy na ny ranomaso ho an'ireo vehivavy maro izay nanjary nalevina ambanin'ny tany rehefa nalevina ambonin'ny tany fony fahavelony; tsy manana fahafahana hiaina andro mamirapiratra tahaka izao izay atrehin'ny vehivavy ary tena mirehareha amin'ny maha-vehivavy azy!